Japana: Ny Hazakazaka Fiarakodia Amin’ny Alina Ho Kolotsaina Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2011 8:28 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, 繁體中文, 简体中文, Español, polski, Français, русский, English
Kiyoshi, any Osaka, dia nandray anjara taminà hazakazaka fiarakodia amin'ny alina tany amin'ny Lapan'i Osaka:
Carna dia manazava ny itiavany azy ity:
Misy mihitsy aza ny lamaody mivoatra sy miavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny hazakazaka fiarakodia amin'ny alina . Nanandrana akanjobà misy jiro DEL i Lafino, natao manokana ho an'ny hazakazaka fiarakodia sy dia an-tongotra amin'ny alina.
Tsy zavatra ampifandraisin'ny olona matetika amin'ny fiainana amin'ny alina sy ny zana-tsampan'ny kolotsaina ny hazakazaka fiarakodia, tsy izany kosa ny an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Mpihazakazak'i Tokyo amin'ny Misasak'alina (MRT). Namolaka ny làlan'i Tokyo ry zareo ireto amin'ny alin'ny faran'ny herinandro; fotoana izay tsy eritreretin'ny ankamaroan'ny olona hanaovana hazakazaka fiarakodia mihitsy. Ho azy ireo, ny hazakazaka fiarakodia amin'ny alina dia tsy fanatanjahantena fa kolotsaina an-dàlam-pivoarana.